नेकपा एकता Archives - Lokpati.com
Tag - नेकपा एकता
काठमाडौं। कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैले चाहेर पनि आफूलाई हटाउन नसकेको बताए। आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यही स्थिरता र स्थायित्व भएको दाबी पनि गरे। उनले बाह्य शक्तिको गोटी बनेर...
काठमाडौं, ६ साउन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले हिजाे ७७ जिल्ला र ६ महानगरपालिका नेतृत्वकाे टुंगाे लगाएकाे छ ।
नेकपा एकीकरणकाे याे टुंगाे लगाउने क्रममा गणितीय हिसाबले केपी ओलीभन्दा प्रचण्ड समूहमा बढी...
नेकपा एकीकरण : के–के छन् टुंगाउनुपर्ने काम ?
काठमाडौं। केन्द्रमा पार्टी एकता भएको १ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि नेकपाको एकताले पूर्णता पाउन सकेको छैन। एकताको मुल काम टुंगिए पनि केही महत्वपूर्ण कामहरु टुंगाउन बाँकी नै छ। तर, नेताहरु निरन्तर प्रयासमा जुटिरहेका...
अझैं टुंगिएन नेकपा एकता
काठमाडौं, ६ जेठ । नेकपा एकता अझैं टुंगिन सकेको छैन। एकता प्रक्रिया अन्तर्गत नेकपाले जिल्ला कमिटीहरुलाई पूर्णता दिने क्रमलाई अन्तिम चरणममा पुर्‍याएको छ।
केन्द्रले प्रदेश र जिल्ला इन्चार्ज तोकेसँगै जिल्ला कमिटीलाई पूर्णता...
नेकपा सचिवालय बैठक : के-के छन् एजेण्डा ?
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता पक्रियाको बाँकी काम टुङ्गो लगाउन सचिवालयको बैठक आव्हान गरिएको छ। एकता घोषणा भएको एक वर्ष पूरा भए पनि एकता प्रक्रियाका केही काम टुङ्गो लाग्न नसकेपछि आज सचिवालय बैठक आव्हान...
एकता टुंगिएपछि नेकपामा उत्साह : को–के भन्छन् ?
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विभिन्न जनसंगठनको नेतृत्व तहको एकतालाई पूर्णता दिएसँगै ती संगठनले गति लिने भएका छन्। माऊ पार्टी एकता भएको एक वर्षसम्म एकता पूर्ण नहुँदा नेता कार्यकर्ता कामविहीन भएका थिए भने...
एकताले ओली–प्रचण्ड मिल्दैनन् भन्ने भ्रम चिरिदियो : योगेश भट्टराई
काठमाडौं, ०३ जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रभावशाली युवा नेता योगेश भट्टराईले बितेको एक वर्ष नेकपा क्रियाशिल हुन नसकेको बताएका छन्।
उनले यो एक वर्षमा केही कमिकमजोरी भएपनि त्यो कार्यकर्ताबाट नभई शीर्ष नेतृत्वबाट...
नेकपाको एकता : एक वर्षभित्र सम्भव छ महाधिवेशन ?
काठमाडौँ, १३ वैशाख। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी एक वर्षभित्र पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेपछि पार्टी वृत्तमा नयाँ उत्साह छाएको छ।
पार्टीको स्थापना दिवसका अवसरमा...